Ninka Sweatshirt -ka ah ee Shiinaha u Dheereeya oo Joogaya ayaa Soo Jiida Hoodies Gasho Unisex Running Unisex Tayada Sare ee Unisex Hoodies Warshadaha iyo Warshadda | Caqli badan
Sweatshirt -ka Caadiga ah ee Sare u orda ayaa ka jiidaya Hoodies Gasho Unisex Running Unisex Cuntada Sare ee Unisex Hoodies
Si kasta oo ay xilliyadu isu beddelaan, dhididka qoorta shaqaaluhu waa lakabka aad u baahan tahay isku-filnaansho sannadka oo dhan ah. Iyada oo la yaqaanno dhididka maalinlaha ah ee aad ugu jeceshahay isla sanduuqa. Midab adag, oo lagu gooyey si joogto ah oo habboon iyo terry faransiis gudaha ah ama dhogor si raaxo loogu helo. Waxaa dhiirrigeliyay qaabaynta firaaqada caadiga ah iyo shaqada irbadda, dhididka qoorta Crew wuxuu ka kooban yahay aasaaska aan waqtiga lahayn. Dharkaan dhaarta ah wuxuu u fiican yahay xaalado badan, sida dhaqdhaqaaqyada bannaanka ee dharka waddada, guriga joog, kulanka saaxiibbada, xirashada qoyska iyo xafladda. Badeecadaha waaweyni waxay dhaafi doonaan 12 tallaabo oo laga soo bilaabo duntii suufka ahayd ilaa dharka oo ay ku jiraan dhowr tallaabo oo ah tayada tayada si loo gaaro gacmaha macaamiisha.
(Heath Heath waa 93% suuf, 7% polyester)
Qaab caadi ah oo joogto ah oo aan lahayn farshaxan
Crew qoorta iyo gacmo dheer
Feeraha suufka ah ee Spandex ee cuff iyo hem
Handfeel dhar jilicsan oo lagu daray qaabka unisex fashion
Waxaan nahay soo -saare, wuxuu leeyahay khibrad wax -soo -saar iyo dhoofinta in ka badan 15 sano.
Wadashaqaynta in ka badan 56 dal oo macaamiisha adduunka ah iyo xiriir ganacsi oo muddo dheer la leh macaamiisheenna duugga ah 3-6 sano, sumadaha Ross ， Forever 21, iwm.
Shahaadada Asalka ayaa la adeegsan karaa
Tallaabooyinka wax -soo -saarka oo ay ka mid yihiin dunta suufka, maro -tolidda, midabka midabaynta, dejinta dharka, kormeerka dharka, goynta dharka, kormeeridda marada dharka, daabacaadda ama baakadda dharka, tolidda dharka, kormeerka dharka, kaarinta dharka, baakadaha alaabta, baaraha irbadda.
Hore: Fashion Poler Fleece Streetwear Ragga Loose Fit Pocket Soild Color Lab Hoodies
Xiga: Ragga Caadiga ah ee Suufka ah ee Terry Faransiis ah oo Xadgudbaya Xad -gudubyada Midabka leh
Dumarka Midabka adag ee Dabacsan ee Dusha sare leh ee Dhididka ...
dharka hoodie -ka ee ragga oo aad u weyn ...